Miarahaba anareo tonga soa ny fivarotana!
Goodyear welt kiraro fiarovana fanorenana
PVC orana kiraro
Inona no anjara asan'ny irery ny avo roa heny ny asa kiraro?
Ao amin'ny fitambaran'ny ankehitriny kiraro irery fitaovana, ny roa hany lasa ny mety indrindra sy ny vahaolana tsara indrindra. Ny fiarovana ny tokana dia tratra ny anaovan'ireo fanoherana sy ny anti-taratasy kely fampisehoana ny outsole, izay nahatsapa ny hazavana sy malemilemy toetra ny midsole. Fampiononana, rehefa mandeha.
Avy izany fomba fijery, ny amin'izao fotoana tsara indrindra fitambaran'ny dia RU / Pu, mampiasa fingotra (RU) mba hahatonga ny outsole, polyurethane (Pu) tahaka ny midsole, ary avy eo ny alalan 'ny adhesive na simika firaiketam-po asa sy ny firaiketam-po fiasan'ny Pu mihitsy famatorana ny outsole ny midsole. Mazava ho azy, ny ivelany irery ny kiraro koa hirindra, manganohano avokoa, ary sary sokitra.
Misy ihany koa ny fikambanan'ny hany fitaovana, izany hoe Pu / TPU (polyurethane / thermoplastic polyurethane). Zava-aina ny akanjo. Ankoatra izany, ny fampiasana ny thermoplastic polyurethane mba hanao ny outsole mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ireo endrika ankehitriny, satria ny hany vita amin'ny TPU afaka mamokatra ny miloko irery, sy ny sary sokitra fizotry ny tokana Azo azy ireo.
Roa sosona iray hafa hany vita amin'ny Pu / Pu (polyurethane / polyurethane) mitambatra ara-nofo, ny outsole sy ny midsole dia vita amin'ny polyurethane. Fa ny outsole, iray tena matevina polyurethane fitaovana dia tsy maintsy ho ampiasaina mba hihazonana ny anaovan'ireo fanoherana toetra ny outsole. Fa ny midsole, foamed polyurethane dia tsy maintsy voafidy ho fampiononana.
Post fotoana: Dec-24-2018
Phone Mobile: 86-536-2598582
NO.7555 ny Xingyuan eny an-dalambe, Zhanglu, Gaomi tanàna,
Weifang tanàna, faritanin'i Shandong, Sina
Mon - Fri: 08AM ny 05 PM
Sat - Sun: 09AM ny 04 PM